नेपालमा कसैलाई पनि कोरोना भएको छैन : डा. पुन - Baikalpikkhabar
नेपालमा कसैलाई पनि कोरोना भएको छैन : डा. पुन
काठमाडौं / टेकु अस्पतालका सरुवा रोग विशेषज्ञ डा. सेर बहादुर पुन नेपालीहरु लाई अहिले सम्म कसैलाई पनि कोरोना संक्रमण भैनसकेको बताउँछन् । अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा नेपालीहरुमा कोरोनाको सवैभन्दा कान्छो भाईरस (सार्क सि ओ भि – 2) मात्रै भएको डा.पुनको भनाई रहेको छ
नेपालमा आइतवारसम्म ५२ जना कोरोना संक्रमित छन् । १६ जनालाई निको भएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा देखिएका ५ संक्रमितलाई ठीक भएपछि नयाँ संक्रमित भेटिएका छैनन् । बाग्लुङका दुई संक्रमित घर फर्किएसँगै त्यहाँ पनि नयाँ कोरोना संक्रमित छैन।
कोरोना संक्रमण अरु देशको भन्दा कसरी फरक ?
५२ मध्ये एउटैलाई पनि गम्भीर समस्या देखिएन। ८१ वर्षकी महिलाले पनि नेपालमा कोरोना जितेको उदाहरण छ। संक्रमणको दर अरु देशको तुलनामा कम छ। संक्रमण पुष्टि हुनेहरु धेरैजसो कोरोनाको लक्षणविहीन छन्। कतिपय केसमा घरमा संक्रमितसँगै बसेकालाई पनि संक्रमण देखिएको छैन। संक्रमितलाई गम्भीर समस्या नहुनु, सर्ने दर कम हुनु र लक्षण नै नदेखिनुका विभिन्न कारणहरु भएको विज्ञहरुले बताएका छन्।
सार्स सीओभी २ भयो तर धेरैलाई कोभिड १९ भएन
नेपालमा गम्भीर समस्या नदेखिनु र मृत्यु नहुनुको कारण धेरैलाई कोभिड १९ नहुनु मान्छन् टेकु अस्पतालका सरुवा रोग विषशज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुन। उनका अनुसार सार्स सीओभी २ कोरोना समूहको सबैभन्दा कान्छो भाइरस हो। र, यसको संक्रमण भएमा कोभिड १९ रोग हुने हो। नेपालमा संक्रमित हुने धेरैलाई कोभिड भएको छैन। कोभिड नभएकै कारणले गम्भीर बिरामी नभएका हुन्। ‘सार्स सीओभी टु भनेको भाइरस हो र त्यसले कोभिड १९ हुने हो। धेरैजसोलाई कोभिड भएको छैन। त्यसैले गम्भीर बिरामी पनि नदेखिएको र मृत्यु पनि नभएको हो,’ पुनले भने।नेपालमा संक्रमण हुने धेरैजसोमा लक्षण देखिएको छैन। त्यसले घरघरमा गएर संक्रमित खोज्नु परेको उनको भनाई छ। लक्षण नदेखिनु भनेको सार्स सिओभी २ हुनु तर कोभिड १९ नहुनु भएको पुनको तर्क छ। धेरैजसो नेपालीलाई भाइरसको संक्रमण भए पनि कोभिड किन भएन भन्ने अनुसन्धानको विषय भएको पुनले बताए।
एक प्रकारको कोरोना पहिले नै थियो, त्यसैले व्यापक फैलिएन
डाक्टरहरु नेपालमा एक प्रकारको कोरोना भाइरस पहिल्य भएको दाबी गर्छन्। जसलाई अनुसन्धानले पनि पुष्टि गरिसकेको छ। यसैको कारण नेपालमा संक्रमण व्यापक नभएको तर्क गर्छन्, विज्ञहरु। जोन हप्किन्स विश्वविद्यालयले सन् २०११-१४ सम्म सर्लाहीमा गरेको अध्ययनले नेपालमा एक प्रकारको कोरोना भाइरस रहेको देखाएको थियो। माइक्रोबायोलोजिष्ट प्राध्यापक डा। प्रकाश घिमिरे एउटा जातको कोरोना संक्रमण नेपालमा पहिले पनि भएकाले नेपालीसँग कोरोनासँग लड्न रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता विकास भएको हुनसक्ने बताउँछन्। उनी संक्रमण कम हुनुमा त्यसको पनि केही न केही भूमिका रहेको दाबी गर्छन्।
‘नेपालमा एक खालको कोरोना थियो जसकारण थोरै क्रस इम्युनिटी पावर विकास भएको हुन सक्छ,’ उनले भने। घिमिरेको तर्कसँग सहमत छन् डा। पुन। संक्रमण ब्यापक नहुनुको एउटा कारण नेपालीमा पहिला पनि एक प्रकारको कोरोना हुनु पनि भएको उनको ठम्याई छ। तर, यसमा अध्यन हुनुपर्ने खाँचो औल्याउछन् डाक्टर पुन।’एक प्रकारको कोरोना त पहिला पनि थियो। त्यसले गर्दा इम्युनिटी विकास भएर पनि संक्रमण कम भएको हुन सक्छ,’
उनले भने। पुन नेपालमा अब कोरोना ब्यापक रुपमा नफैलिनेमा आशावादी छन्। नेपालमा चाँडै कोरोना नियन्त्रण हुने उनको धारणा छ। अस्पतालमा पनि धेरै कम बिरामी आएको र अहिले कोरोनाको संक्रमित कहाँ छ भनेर खोज्दै जानुपर्ने अवस्था हुनले पनि त्यस्तो संकेत गरेको हो। ‘हामीहरु पीपीई लगाएर बसिरहेका हुन्छौं तर दिनभरि पनि संक्रमित आउँदैनन ।
theleaderofnepal.com बाट साभार
मङ्गलबार, १६ बैशाख, २०७७, बिहानको ०४:१५ बजे